အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - သမဝါယမဝင်မည်မေ့နေ
သင့်ရဲ့သုံးစွဲသူအမည်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ Password ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ?
အကယ်. သင်က သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, သင်၏ E-mail ကိုလိပ်စာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Send အသုံးပြုသူအမည် button ကို click နှိပ်, သင်၏အသုံးပြုသူအမည်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်ပါ။
အကယ်. သင်က သင့်ရဲ့ username နဲ့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုမေ့, စကားဝှက်, ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူအမည် recover ပေးပါ။ သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည် recover လုပ်ဖို့, အချည်းနှီးသော Username နေရာမှာထွက်ခွာ, သင့် E-mail ကိုလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ, ထို့နောက် Send အသုံးပြုသူအမည် button ကို click နှိပ်, သင်၏အသုံးပြုသူအမည်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ ထိုအရပ်မှသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို recover ဤတူညီသောပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။
အကယ်. သင်က သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်ကိုသိ, သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်သင့် E-mail ကိုလိပ်စာရိုက်ထည့်အဆိုပါ Send Password ကိုခလုတ်နှိပ်, သင်မကြာမီအသစ်တခု password ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ပါ။ ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ဤစကားဝှက်အသစ်ကိုသုံးပါ။